WAHSIGA IYO SHAQO DIB U DHIGASHADA! (Q4) – WARSOOR
Waxaa kale oo isaguna jira Barnaamijka ‘Productivity Owl’ oo isna loo adeegsado in lagu samaysto jadwalka shaqo si looga hortago wahsiga. Dadka isticmaalay barnaamijkani waxa ay ku naanayseen in uu yahay maamule shaqo oo xafiiska iyo gurigaba kula joogaya, iyaga oo ka eegaya sida uu ugu ad-adagyahay fulinta hadba waxa aad ka dalbato in uu kugu ilaaliyo. Haddii aad ka baydho jidka aad la jeexatay in uu kugu ilaaliyana quudhsi iyo dhaliil ayuu kuugu beddelayaa. Waxaa iyaguna jira Barnaamijyada ‘MindTastik’ iyo ‘Mindly’ oo talefannada iyo Tablets ka lagu soo dejiyo iyaga oo bilaa lacag ah, isla shaqadaasna qabanaya.
Barnaamijyada aynu xusnay iyo kuwo kalaba waxa aad u adeegsan kartaa in ay kaa kaalmeeyaan in waqtiyada shaqada iyo nasashada ay kuu nidaamiyaan. Barnaamijyadani waxa ay ku xidhmaan bogagga internet ka laga galo, gaar ahaan barnaamijkii ‘Pomodoros’ waxa aanay xidhaan barnaamij kasta oo ay u arkaan in aanu isticmaalkoodu ku jirin jadwalka loo sheegay, ama waqtigoodu uu dhaafay waqtigii loo qoondeeyey. Tusaale ahaan waxa uu kaa xakamaynayaa isticmaalka baraha xidhiidhka bulshada sida facebook iyo Twitter iyo shabakadda filimada laga daawado ee Netflix.
KA FAA’IDAYSIGA DADKA SOO MARAY DHIBAARADA WAHSIGA
Dhiirrigeliyaha caanka ah ee Tim Urban ayaa ka mid ah dadka soo maray dhibaatada wahsiga ee markii ay iska dabiibeen iyagu, haddana xiiseeyey in ay dadka la wadaagaan xal u raadinteeda. Waxa uu leeyahay shabakad aad wax badan ka faa’iidaysan karto oo lagu magacaabo, ‘Wait but why’ https://waitbutwhy.com/ boggan waxa uu ku soo bandhigaa talooyin, tusaaleyaal, tababarro iyo waayoaragnimo wax badan kaaga faa’iidaynaysa ka gudbista xaaladda wahsiga.
Sida oo kale waxa uu jeediyey hadallo uu kaga sheekaynayo dhibaatada soo kala martay wahsiga.
Hoos ka daawo muuqaalka mid ka mid ah hadalladaas oo uu kaga sheekaynayo qiso xiise badan oo muujinaysa, sida uu wahsigu u galaaftay qoraalka buuggiisii dhammaystirka jaamacadda.
Buugga ‘Procrastination: Why You Do It, What to Do About It Now’ ayaa ka mid ah buugaagta sida fiican qofka uga caawin kara ka gudbiso marxaladda ah hawl dib u dhigashada iyo in lagu mashquulo hawl aan ahayn tii runta ahayd ee loo socday. Waxa uu qofka u tababarayaa in uu is weydiiyo ‘Sababta uu hawl u qabanay?’ iyo ‘halka uu hawshaas hadda kaga aaddanyahay’. Waxa uu kaa caawinaya in aad fahamto sida ay ku yimaaddaan wahsiga iyo hawl dib u dhigashadu.
Waxa ka sii xiise badan in uu xambaarsanyahay nidaam dabiib oo uu qofku kaga bogsan karo xaaladdan cagajiidka iyo shaqo ka warwareegista ah ama jiitanka shaqo keenta.